Ingqesho - iindaba zengqesho | Ezezimali
Zonke iindaba ngaye yengqesho nentswela-ngqesho. Kweli candelo uya kuba nakho ukugcina unolwazi ngazo zonke iinguqu zomthetho ezenzeka kwinqanaba labasebenzi. Sikwazisa malunga nokuphambili isaveyi yengqesho nentswela-ngqesho eSpain naseYurophu.
Ingqesho ibisoloko yenye yezihloko ezixhalabisa abemi, kweli candelo lewebhu sikunika lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze uhlale unolwazi ngazo zonke iindaba kunye neendaba ezinomdla kwi ubungakanani bomsebenzi.
Ukuba ndinemisebenzi emi-2, ngaba ndihlawula kabini?
Iya ixhaphaka into yokuba ungabinamsebenzi nje omnye, kodwa ube mibini. Ukungakhuseleki komsebenzi kunye nenyani yokuba ...
Ithatha ixesha elingakanani i-SEPE ukuphendula isicelo sangaphambili
Xa uphelelwa ngumsebenzi kodwa usazi ukuba uya kukwazi ukuqokelela izibonelelo zokungaphangeli, uye ukhululeke ngakumbi. Kodwa,…
Ngaba u-ERTE ucaphula ukungabikho kwemisebenzi?
por IClaudi Casal yenzayo Iinyanga ze4 .
Ukusukela ubhubhani omkhulu we-COVID ngo-2020, into ebizwa ngokuba yi-ERTES ibaluleke kakhulu…
Indlela yokuqokelela iiholide ezihlawulweyo nezingasetyenziswanga
por Encarni Arcoya yenzayo Iinyanga ze5 .
Xa usebenza nekhontrakthi, uyazi ukuba, ngokomthetho, unelungelo loluhlu lweentsuku zeholide. Nangona kunjalo,…
Ixesha lovavanyo kwisivumelwano esingenasiphelo: Yintoni, ihlala ixesha elingakanani, kwenzeka ntoni xa ugxothwa
Ukufumana umsebenzi liphupha labantu abaninzi, ngakumbi ukuba endaweni yesivumelwano sethutyana bakunika…
Iqokelelwa nini intlawulo yehlobo elongezelelweyo?
Enye yeenzuzo ezinkulu zokuba nekhontrakthi kunye nokuba ngumsebenzi kukuba awufumani eyakho…
Kuthini ukuthatha umhlala-phantsi kubantu abazisebenzelayo
Abaziqeshileyo banenzuzo ethile kunabasebenzi abaqeshiweyo. Kodwa kunye nezinto ezininzi ezingalunganga kunye nokuthatha umhlalaphantsi yayiyenye...
Yintoni ukunqunyanyiswa kwengqesho kunye nomvuzo
Esinye sezixhobo ekufuneka inkampani "ilawule" abasebenzi bayo kwaye ibathintele ekuveliseni iimeko…
Indlela yokutywina ukungasebenzi kwi-intanethi inyathelo ngenyathelo
Ukwazi indlela yokutywina intswela-ngqesho kwi-Intanethi inyathelo ngenyathelo akunzima. Nangona kukho inkqubo ...
Into ayifunayo wonke umsebenzi kukugcina umsebenzi wakhe. Nangona kunjalo, kukho amaxesha apho, ngakumbi ...
Ngokuqinisekileyo ngaphezu kwexesha elinye ulivile igama elithi ukuzimela. Ngapha koko, sinokuthi yifashoni ngoku ...
Ithini inombolo yam yokhuseleko lwentlalo kunye nendlela yokufumana ikopi
Ileta yokuyeka emsebenzini
Uthini umvuzo wolwelo
Ufunda njani ukuba ubhatala kwaye uyazi ukuba kulungile